Ciidamadii Afrikanka ahaa ee hoggaanka u qabtay iska hor imaad aan waxbadan laga ogeyn ee dagaalkii labaad? - BBC News Somali
Ciidamadii Afrikanka ahaa ee hoggaanka u qabtay iska hor imaad aan waxbadan laga ogeyn ee dagaalkii labaad?
Howlgal xoogan oo loo yaqaanay D-Day Landings, kuma koobneyn oo keliya xulafadii Faransiiska xilligii uu socday dagaalkii labaad ee dunida.
Bishii August - laba bilood ka dib markii uu weerarkan dhacay - waxa la sameeyey howlgelin ballaaran si ciidamada ay uga tagaan kuwii Jarmalka.
Sannad guurada dagaalkan waxaa looga dabaal dagaa Faransiiska iyada oo ay ka soo qayb galaan madax ka tirsan qaaradda Afrika, sannadkan madaxweynaha Faransiisaka Emmanuel Macron wuxuu soo dhaweeyey madaxda dalalka Ivory Coast iyo Guinea, Alassane Ouattara iyo Alpha Conde.
Saraakiil ka tirsan dalal ay gumaysteen Faransiiska oo ka koobnaa saddex jibbaar ciidamadii Faransiiska ee 1944-tii ayaa guuldarro kala kulmay duullaankii 1940-kii.
Waxa lagu qiyaasaa in ciidamo Afrikan ah oo ka badan hal milyan ay ka barbar dagaallameen xulafadooda, dagaalkii labaad ee adduunka.
Maraykanka oo ciidan geeyay Poland
Dagaalkan oo lagu waday inuu dhaco 6-dii bishii June ee 1944, ayaa la hakiyey ka dib markii khayraadkii loogu talagalay la waayay.
Hase yeeshe, waxay noqotay lagama maarmaan ka dib markii dadaalo xooggan oo ay xulafada Jarmalka ay culeys hor leh saartay.
Ujeedada ayaa ahayd in la badbaadiyo dekadaha Faransiiska ee saaran badda Mediterranean, taas oo bilow u noqotay dagaallo hor leh si culays loo saaro Jarmalka.
Howlgalka Dragoon ayaa kala qeybsanaan ka dhex abuuray militariga. Ingiriiska wuxuu ka soo horjeeday duullaan hor leh oo Faransiiska uu qaado balse wuxuu xoogga saarayay dadaalladii uu ku doonayay in howlgal ay xulafadiisa qeyb ka yihiin lagu qaado Taliyaaniga.
Xog laga soo xigtay milateriga Maraykanka ayaa lagu sheegay in howlgalka ay ka qayb galeen ciidamo gaarayay 500,000 oo ku dhawaad 230,000 oo ka mid ah ay ahaayeen Faransiis.
Weerarka ayaa ka howl fududaa marka la barbardhigo D-Day Landings, iyadoo la sheegay in markii ugu horeysay, awoodda xoogaggii Jarmalka la wiiqay tan iyo duullaankii koowaad.
Weerarkii hore wuxuu qaatay laba bilood iyo seddax isbuuc, balse Dragoon waxaa lagu soo gabagabeeyey muddo bil ah.
Taariikhyahan dhanka dagaallada ku taqasusay oo u dhashay Ingiriiska, Antony Beevor, ayaa sheegay in dhaliilaha ay yihiin in howlgalkii labaad loo isticmaalay khayraad saamayn toos ah ku lahaa dagaalkii qaboobaa.
Dooda ayaa ahayd in loo baahnaa inay isticmaalaan midowgii Soviet si ay uga hortagaan in dalalkii bariga Yurub ay yeeshaan awood u gaar ah.
Dadaalkii ay sameeyeen askartii ka soo jeeday Afrika "ayaan weligii heli doonin qadarin".
Ciidamadii Afrikaanka ahaa ayaa xarumihii Faransiiska laga kexeeyay dhammaadkii sannadkii 1944.
Balse 2017-kii, Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande waxa uu ku dhawaaqay in ciidamadii Afrikaanka ahaa ee dagaalkii labaad ee dunida ka qeybgalay ay mudan yihiin magdhow.